मुटु ठिक राख्ने तरिका :: डा. अनिल भट्टराई :: Setopati
मुटु ठिक राख्ने तरिका
डा. अनिल भट्टराई वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ
हाम्रो शरीरमा धेरै अंग छन् । धेरै अंगहरु दुईवटा भएपनि मुटु एउटा मात्रै हुन्छ । मष्तिस्कको पनि दुई भाग हुन्छ।किड्नी,फोक्सो दुईवटा हुन्छ । कलेजो दायाँ बायाँ दुई भाग हुन्छ। बाहिरबाट हेर्दा मुटु मुठ्टी आकारको हुन्छ।मुटुमा चारवटा कोठा हुन्छन्, दुईवटा तल र दुईवटा माथि।
मुटुबाट दुईवटा नसा निस्किएका हुन्छन् जसमध्ये एउटा टाउकोबाट आएको हुने गर्छ भने अर्को शरीरको तल्लो भागबाट आउँछ। तलबाट आउने नसाले फोहर रगत लिएर आउछ। यसरी आएको रगत मुटुको दायाँ भाग हुँदै फोक्सोमा जान्छ। फोक्सोमा पुगेपछि अक्सिजन युक्त रगत मुटुको देब्रे भागमा चारवटा नलि मार्फत फर्किन्छ। मुटुले पम्प गरिसकेपछि त्यो रगत शरीरभरी सञ्चार हुन्छ । स्वस्थ मुटुले यसरी काम हुन्छ । स्वस्थ मुटु प्रतिमिनेट ६० देखि ९० पटक सम्म धड्किन्छ। भर्खर जन्मिएको बच्चाको १ मिनेटमा १ सय ४० पटक धड्किन्छ । उमेरसँगै मुटुको धडकन कम हुदै जान्छ।
मुटुरोग दुई किसिमका हुन्छन्। एउटा जन्मजात र अर्को वयस्कमा हुने मुटुरोग। जन्मजात हुने मुटुरोगका कारण र वयस्कमा हुने मुटुरोगका कारण फरक फरक हुन्छन्। उमेर बढेसँगै हुने मुटु रोगका पनि कारण फरक हुन्छ।
जन्मजात मुटुरोगमा पिडीय भन्ने हुन्छ। जहाँ अक्सिजनको मात्रा कमी हुन्छ, त्यहाँ पिडियको समस्या हुन्छ। नेपालमा पिडियको समस्या अन्य देशमा भन्दा बढी छ। अर्को बाथ ज्वरो बिग्रीएर मुटुको भल्भहरु खराब हुने समस्या धेरै छ। जुन नेपालमा सबैभन्दा ठूलो समस्याको रुपमा रहेको छ। विकसित देशहरुमा त यो समस्या निर्मुल नै भइसकेको छ।
शरीरको तौल नियन्त्रण हुनुपर्छ । अहिले सहरीया जिवनशैलीका कारणले शरीरको वजन एकदमै बढिरहेको छ । यसको लागि शारीरिक ब्यायम गर्नुपर्छ । यसको लगि कम्तिमा ३० मिनेट पसिना आउने गरि ब्यायम गर्नुपर्छ । तारेको भुटेको खानेकुराहरु सकेसम्म खान भएन ।कार्वोहाइड्रेट बढि हुने भात आलु गुलियो पदार्थहरु कम खानुपर्छ।
धुम्रपान र मद्धपानबाट टाढा रहनुपर्छ। चिन्तारहित जिन्दगी जिउने प्रयास गर्नुपर्छ।नियमित रुपमा स्वास्थ्य परिक्षण गर्नुपर्छ।
यसैगरी सुगर र कोलस्ट्रोललाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भने चिल्लो र बोसोजन्य खाना अनि मासु कम खानुपर्छ।
(डा भट्टराई त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ तथा उपप्राध्यापक हुन)
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ४, २०७६, ०१:०९:००